सरकारविरुद्ध गगन थापाको डरलाग्दो चेतावनी ,भन्छ्न संसद बैठकमा मुठभेड हुनसक्छ ! – Himalitimes
सरकारविरुद्ध गगन थापाको डरलाग्दो चेतावनी ,भन्छ्न संसद बैठकमा मुठभेड हुनसक्छ !
२०७५ माघ १० १८:५१ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं पूर्वमन्त्री गगन थापाले सरकार विरुद्ध डरलाग्दो चेतावनी दिएका छ्न । उनले सभामुखको भूमिका तटस्थ र सरकार जिम्मेवार नभए भोलिको संसद बैठकमा मुठभेड हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन ।
थापाले सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारको आदेश पालना गरी संसदीय मूल्य मान्यता विपरित गतिविधि गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो कदम मान्य नहुने स्पष्ट पारे । बिहीबार काठमाडौंमा भएको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ संसदबाट झुक्याएर पारित गराउने प्रयास भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
थापाले माघ ११ गते शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले आफूसँग परामर्श गरेर मात्रै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना गरिएको अस्पताल खारेज गर्ने काम नगर्न सरकारलाई दवाव दिएका थिए ।
द्वन्द्वकालका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको तयारी
विद्यालय बन्द गरेर खर काट्दै अभिभावक विद्यार्थी